Documentation Assistant – Mandalay- Female (1 ) Post at Shwe Phon Co.,Ltd | MyJobs
1. ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ / ဥပဒေဘွဲ့ ရရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ ဥပဒေနှင့် တခြားဘွဲ့ရများ ဖြစ်ပါက L.C.C.I Level II အောင်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
2. Computer Skill, Internet, Email ကျွမ်းကျင်ရမည်။ Microfinance အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွမ်းကျင်သူကို ဦးစားပေးမည်။
3. အသက် (25) နှစ်မှ (30) နှစ် အတွင်း ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သည့် အမျိုးသမီး ဖြစ်ရမည်။
4. သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ် အထက်ရှိရမည်။
5. မိမိဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအပေါ် တာ၀န်ယူမှု့/ တာ၀န်ခံမှု့ ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
6. ဌာနဆိုင်ရာများ၊ customer များနှင့် လုပ်ငန်းအဆင်ပြေ အောင်မြင်ရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ လူမှု့ဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်ရမည်။
Mandalay | Full Time | MMK 200,000 - 400,000 | Negotiable
Mandalay | Full Time | MMK 1,000,000 - 1,500,000 | Negotiable
I saw this job posted on https://www.myjobs.com.mm/job/856088 and thought you might be interested in it.